Recipe ho an'ny valala amin'ny holatra
Funchoza - nohodim- bary maitso, izay tsy misy tsirony. Fa raha mampifangaro azy amin'ny holatra, legioma na hena, dia manova tanteraka ny endriny rehetra ary manasongadina ny tsiron'ny singa rehetra. Andeha hojerentsika fomba fikarakarana vitsivitsy miaraka amin'ny holatra.
Funchoza miaraka amin'ny legioma sy holatra
voankazo masira voatoto - 200 g;
soja soza - 2 tbsp. lovia kely;
volomparasy vaovao - raha ilaina;
Mba hanomanana salady ahitana holatra sy holatra dia manomana ny sakafo rehetra voalohany. Mba hanatanterahana izany, dia diovina ny jiro, manasa azy ary manilika ny semi-circles. Ny karaoty dia voadio sy mihosotra amin'ny rantsana manokana. Ny tongolitsika dia mandalo amin'ny gazety. Apetaho eo ambonin'ilay poketrany ny menaka, atsipazo ny menaka, ary sasao. Taorian'io dia niparitaka ireo tongolobe ary namporisika tsindraindray, dia omentsika ny mangarahara.
Ampio ireo holatra, haniry 5 minitra ary hanaparitaka ireo karoty, voapoizin'ny boligara. Afangaro ny legioma mandritra ny 5 minitra eo amin'ny lelafo marefo ary amin'ny farany dia manipy tongolo lay isika, mando ao anaty saosy soy , fotoana miaraka amin'ny zava-manitra, mifangaro ary mialà amin'ny hafanana. Miaraka amin'ny fikarakarana ny legioma dia manasitrana ao anaty fonobe lehibe fuczozu, mametraka azy amin'ny rano mangotra mandritra ny 5 minitra. Aorian'izay dia atsipazo ao anaty paty ny oto-pokontany, manasà sy manindrà fo amin'ny legioma sy holatra. Mifangaro tsara ny zava-drehetra, mametraka ny felany miaraka amin'ny holatra ao anaty vilia salady ary manolotra ny lovia eo amin'ny latabatra, manamboatra zavamaniry vaovao.
Funchoza miaraka amin'ny holatra sy akoho
Sakafo maitso maitso - 100 g;
posy holatra - 6 p.
tetezana chicken - 0,5 pcs .;
mavo mena - 0,5 pk.
sauce "Yakitori" - 1 sachet;
Paprika mamy, sesame, zava-manitra.
Andeha hodinihintsika ny fomba hanomanana ny holatra amin'ny holatra. Noho izany, ny dipoavatra Boligara dia alaina, voasasa ary manapaka amin'ny tadiny kely. Voasary ny antsy, voahodidin'ny peratra boribory ary mafana haingana eo amin'ny menaka fanosotra mafana amin'ny solika. Avy eo dia mamelatra ireo holatra, tapaho amin'ny takelaka kely. Aorian'izany isika dia manampy ireo voatabia voatabia voatabia, tavy ary diplaomaty.
Alao ny legioma rehetra, 2 minitra monja, ary alao ny akoho, voapotsitra kely, manipy ny tavy mofomamy mofomamy, sesame, sira mba hanandrana sy hamafana tsara. Mifanaraka amin'izany, mamay ny holatra amin'ny rano mangotraka, manaisotra azy ao anaty paty, manasà rano mangatsiaka ary alefaso amin'ny legioma. Fenoy ny sokatra "Yakitori" izao ary ento ny sakafo amin'ny hafanana mahazatra mandritra ny 3 minitra, mamporisika. Izany rehetra, voninkazo mahasalama sy mahasalama miaraka amin'ny legioma sy holatra dia vonona!
Funchoza misy kirany sy holatra
posy holatra - 100 g;
soja soza - 3 tbsp. lovia kely.
Ny holatra masira masira voamaina eo amin'ny menaka misy menaka mandra-pahamamy volom-bolamena. Shrimp dia madio izahay ary manampy ireo holatra. Asio rehetra miaraka amin'ny zava-manitra, alao ny afovoan'ny rano, alatsaho ao anaty saosy soja ary totoina mandritra ny 5 minitra. Sefo marary ao anaty fonosana matevina fucchosa, mameno azy amin'ny rano mangatsiaka ary miala amin'ny 5-8 minitra. Aorian'izay dia asio rano amin'ny rano mangatsiatsiaka ny poti-tsakafo, ary apetaho amin'ny ampahany, ary amin'ny ambony dia mametraka holatra isika miaraka amin'ny kirany. Mandritra ny sakafo dia omeo rano ny salady hanandrana sòsana soja hafa ary manompa ny lovia amin'ny endrika mafana.
Voangom-bary ao an-trano
Ahoana no hanaovana saosy ho an'ny pasta?
Pumpkin miaraka amin'ny apples, mofomamy ao anaty lafaoro
Salady miaraka amin'ny akoho hena
Salady misy pancakes sy ham
Lisitry ny tsena Lviv
Faritra Krasnodar - miala sasatra amin'ny ankizy
Allergie mandritra ny fitondrana vohoka - fitsaboana
Karazana sy lamaody ho an'ny vehivavy matavy
Ny fomba hikarakarana ny sokatra tany - fitsipika sy lohahevitra manan-danja amin'ny votoatiny
Jackets - Herinandro 2013
Ahoana no hambolena kestnut avy amin'ny nut?
Yeisk - mitokana amin'ny ankizy
Kobay kavia - ahoana ny sira ao an-trano?
Famindrana papilôla amin'ny azota azony